Madaxa Madaxweyne Farmajo oo lagu heysto kufsi – Somali Forum
Madaxa Madaxweyne Farmajo oo ku kacay fal aad u fool xun.
Saciid Maxamuud Warsame Waa madaxa Madaxweyne Farmajo, waana Madaxweynaha abtigii, waxaa ay Soomaalidu u taqaanaa Saciid Kampala, waxaa uu in mudo ah ku noolaa wadan ka Uganda.
Madaxweyne Farmajo ayaa u magacaabey xilka uu hada hayo, ka dib markii uu ka shakiyey dhalinyadii ka Shaqeyn jirtey qeybta madaxtooyadda sababo amnigiisa la xiriira aawgeed.
24-kii Bishii March ee Sanadkan 2018, Saciid Kampala waxaa uu kufsi u geystey Gabar ka mid aheyd shaqaalaha Madaxtooyadda, Isla markiiba agaasimaha Madaxtooyadda Fahad Yasin ayaa kiiskaasi si xoose u xaliyey, waxaana lagu bixiyey lacag dhan $35,000 sodon iyo Shan kun oo Doolarka Mareykan ah.
16-ka Bisha July ee isla sanadka Saciid Kampala waxaa uu markale kufsi u geystey Haweeney Da’ah oo ka mid aheyd Madaxdii Dowlad hore oo caan ah. Agaasimihii la bedeley ee Madaxtooyadda Fahad Yasin iyo ku-xigeenkiisa Aamino Saciid oo hada ah Agaasimaha Guud ee Madaxtooyadda ayaa ku kala duwan in Saciid Kampala shaqada laga ceyriyo iyo Maxkamada la geeyo.
Iyadoo arinta meeshaas ay mareyso ayaa Madaxweyne Farmajo waxaa uu safar shaqo ku tegey Jamhuuriyadda Djibouti, Saciid Kampala ayaa isla hotel uu Madaxweynaha deganaa ku xoogey Gabar Reer Djibouti ah oo ka Shaqeyneysey soo dhoweynta Madaxweyne Farmajo, hase ahaatee nasiib daro Madaxweyne Farmajo lama garan Karo inuu la socdo dhibaatooyin uu ku kacaayo abtigii ahna protocol kiisa. Lama garan Karo talaabada uu ka qaadi karo Madaxweynaha hadii uu ogaa Sida ay wax u jiraan.
Previous: Beesha Aadan Madoobe iyo Daraawiish Part 1
Next: Gaashaanle Sarre Cabdilaahi Kashifay Arrintii Kufsiga Ee Farmaajo Gaystay 1986-87.